Barasaab ku xigeenka Wajeer oo la dhaarinaya | Star FM
Home Wararka Kenya Barasaab ku xigeenka Wajeer oo la dhaarinaya
Barasaab ku xigeenka Wajeer oo la dhaarinaya
Waxaa lagu wadaa in dhawaan xilkiisa loo dhaariyo Haashim Muuse Yuusuf oo barasaabka ismaamulka Wajeer Axmad Cali Mukhtaar uu horraantii bishii hore u soo xushay inuu ku xigeen u noqdo.
27-kii bishii siddedaad ee sanadkan ayay ahayd markii guddoomiyaha guddiga qaabilsan xafladda dhaarinta barasaabka ku xigeenka Wajeer Cabdullahi Xasan Macallin uu arrinkan ku soo daabacay wargeyska rasmiga ee dowladda.
Tallaabada uu xafiiska kula wareegayo Haashim Muuse ayaa ku soo beegmaysa ka dib markii wakiillada golaha hoose ee ismaamulkaasi ay horay u turxaan bixiyeen kadibna la ansaxiyay.
Xilka barasaab ku xigeenka dowlad deegaanka Wajeer ayaa bannaanaaday bishii shanaad ee sanadkan xilligaasi oo Axmad Cali Mukhtaar laga dhigay guddoomiye maadaama xilka laga qaaday Maxamad Cabdi Maxamuud oo Wajeer hoggaaminayay.
Xafladda dhaarinta ayaa ka dhacaysa xarunta dhexe ee dowlad deegaanka Wajeer.
Previous articleMoses Kuria oo sheegay in sanadka 2022-ka uunan xil hoggaan u tartami doonin